Amakhanda njengezilwane ezifuywayo - nawo afanele izingane zesikole?
Gcina amagundane njengezilwane ezifuywayo uma kufanelekile
Amagundane yisilwane esifanele izingane zezingane esikoleni. Akuzona nje ukuthakazelisa ukugcina, izingane zibuye zifunde nendlela yokubhekana nesilwane ekusebenzisaneni kwabo nsuku zonke namagundane amancane. Ngaphezu kwalokho, amagundane njengezilwane ezifuywayo adinga ukunakekelwa nsuku zonke futhi, ngaphezu kwakho konke, ezihlukahlukene.
Izingane namakhofu njengezilwane ezifuywayo
Amagundane ayilwane le-nimble okumelwe liphathwe ngokucophelela. Uma bazizwa bekhuthele kakhulu, bangaluma.
Uma uhlwitha, masinyane usuke eshaqeka ukuphathwa nokungalungi, isib. Ukudonsa umsila kungabangela ukulimala okukhulu. Ezinganeni ezincane kakhulu, ama-rats akafanelekile, njengabantwana abanokuziphatha okungaqondakali.
Esikhathini sobudala esikoleni samabanga aphansi, izingane zinekhono lokuphatha amakhompi ngokuhlakanipha. Ngesikhathi esifanayo, isithakazelo esilwaneni esingavamile sanda phakathi kwezingane. Izinambuzane nezingulube ze-Guinea akusekho phakathi nentshisekelo.
Amagundane athambekela ekubuseni-asebenzayo, kodwa ngokuvamile avumelana nomnakekeli wabo futhi asebenza ntambama.
Ukuhlakanipha kwabo kwenza kubangele ikakhulukazi izingane. Noma ubani osebenzelana njalo nezilwane, athole ngokushesha. Bathanda ezihlukahlukene, ngakho abanikazi babo abancane bangakwazi ukuyeka umusi uma beka uphahla. Izindawo zokudlala zomdlalo wonke zingenziwa kusuka emathanjeni, amabhokisi anezimbobo kanye namathekisthi wephepha nezinye izinto. Ngosizo lokuqeqeshwa kokuchofoza, ungakwazi ngisho nokuwafundisa kalula amaqhinga.
Indlela efanele yokubhekana namakhophu
Ikakhulukazi ekuqaleni kubalulekile ukuhamba nezingane ngokunakekela izilwane. Kumele ufunde ukufika enkathini ngokuthula ngenkathi ukhuluma ngokuthula izilwane.
Kwabaqalayo ekwenzeni i-rat, kunconywa ukuba sinqume ngokuthenga izilwane ezinzima kakade. Uma ufuna ngempela ukuba nezilwane ezincane kakhulu, kufanele ubhekane nabo ngokujulile nsuku zonke, ukuze ziphatheke kahle. Abesilisa ngokuvamile bahlaziye lapho besebenzisana nabesifazane.
Futhi, ukuphakanyiswa kufanele kwenziwe. Ngenkathi ingane isilalile kakhulu lapho isebenzelana nezilwane ezingabe zisawohloka zonke ukunyakaza kwesilwane ngokushaqeka, sekuyisikhathi sokuthola amagundane aphume emgodini ngaphandle kokuqondisa.
Akenzi amantombazane ajabule ukuthwala emahlombe abo emigwaqweni. Lokho kubonakala kubanda kakhulu kubantwana abadala. Kodwa kungukucindezeleka nje kwezilwane.
Amagundane abe nokuziphatha okukhethekile komphakathi. Bajabule ngempela njengezilwane zepakethe, uma zigcinwa okungenani kwesithathu. Ukutshala komuntu ngamunye kungukuhlukunyezwa kwezilwane. Iqiniso lokuthi ugwayi luba yinto elula lapho behlala bodwa yinto engafanele evamile.
Amagundane ahlakaniphile adinga isikhala esiningi. Okuhle kakhulu ibheji elikhulu elinemigoqo enezingqimba, njenge-aviary enkulu yezinyoni. Lokhu kungenziwa eklanyelwe njengokufunwa ngezakhiwo ezakhelwe ngaphakathi kanye namathuba okukhuphuka. Ngabazali abanekhono abanamakhono, ikhabethe elidala lingabuye liguqulwe libe ikhaya elisha lomlingo.
Ukudla kuxubene, njengoba amagundane ayenziwa ama-omnivores. Ukudla okuyinhloko kuyidla yokudla, ukuxuba kokudla kwezinhlamvu kanye nembewu. Ngaphezu kwalokho, ezifuywayo ezincane zidinga izithelo nemifino esisha nsuku zonke. Njengokwelapha phakathi kwalawo ama-cottage ushizi, i-yogurt, ama-noodle aluhlaza, ama-biscuits ezinja kanye nezinambuzane ezithile, njengama-cricket.
Amagundane agcinwa njengezilwane ezifuywayo ahlangene nalokho "namagundane okugcoba" noma amagundane asundu. Ziyizimpumputhe zokuhlola ezivela kuma laboratories okuhlola izilwane, kodwa lokhu akusho ukuthi bayagula.
Ngeshwa abagugu. Iminyaka emibili isivele igugile ngamagundane amancane. Izingane zifunda kangcono kangangokuthi ekugcineni kufanele zisho ukuthi zitholela isilwane sabo. Ngakolunye uhlangothi, umuntu akabophezeli kumagund isikhathi eside, okuyinto enenzuzo kubazali abaningi phezu kwamakati nezinja.